We.com.mm - လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရေးမြို့မှာ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ပျက်စီး
ယနေ့ ၈. ၁. ၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (ရး၃၀)အချိန်ခန့်က မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ကုလားကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု (အောက်ဆိပ်)တွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ(၁၀၀)ကျော်ခန့် ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရွာထဲရှိ အိမ်တွေ ကုန်သလောက်ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူများစွာ အခက်အခဲဖြစ်လျှက်ရှိ နေပါတယ်။ လတ်တလောသတင်းတွေအရ လူသေလူပျောက်တော့ တစ်ယောက်မှမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေအိမ်တွေ ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် နေထိုင်စားသောက်ရေးတော့ အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ နီးစပ်ရာ ပရဟိတစေတနာ့ အသင်းအဖွဲ့တွေမှလည်း သွားရောက်ကူညီပေးကြပါရန် လေးစားစွာနဲ့ တိုက်တွန်းဖော်ပြအပ်ပါတယ်။
We နံနက်ခင်း သတင်းများ
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးမပြုပဲထိုင်နေသူတွေ ဥပဒေအရ ထောင်သုံးနှစ်ကျခံရနိုင်
ဆေးသုံးတယ်လို့ လုပ်ကြံစွပ်စွဲခံရတဲ့အပြင် iKON အဖွဲ့ကနေပါ ထွက်ရတော့မယ့် B.I